Isi egwuregwu kacha mma n'afọ | Akụkọ akụrụngwa
Igwe egwu egwuregwu kacha mma n'afọ
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ na-enwe ọ spendingụ itinye obere oge n'efu ị nwere n'ụbọchị gị ụbọchị na-eme ụdị egwuregwu, n'ezie n'ihe karịrị otu oge ị ga-ahụ ihe nwere ike ịbụ nri anyị kwa ụbọchị, ọ dị nwute na ime ụdị egwuregwu ọ bụla, anyị enweghị ike inwe olile anya na mmadụ ga-esonyere anyị.
N'ihi nke a na na ọ na-abụkarị ihe na-agwụ ike ịga ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ịme ụdị egwuregwu ọ bụla n'èzí naanị, ọtụtụ n'ime anyị na-akụ nzọ, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-ege egwu mgbe anyị na-arụ ọrụ a na, maka nke ahụ, anyị na-eme ya. mma enweghị obi abụọ bụ nzọ na ụfọdụ egwuregwu isi. N'iburu nke a n'uche, taa achọrọ m ka anyị kwuo maka ndị nọ na ActualidadGadget dị ka ndị kachasị mma na 2017 niile.
1 Plantronics BackBeat Kwesịrị Ekwesị
3 Cellularline Scorpion na ntị Pro
5 Powerbeats 2 Ikuku
Plantronics BackBeat Kwesịrị Ekwesị
Anyị nwere ike na-elele otu n'ime okpu agha Bluetooth emere iji kpọọ egwuregwu ndị ama ama na obodo niile. Ugwu a, n'adịghị ka n'oge ndị ọzọ, ha kwesịrị inye aka n'ihi na, ozugbo anyị malitere iji ha, anyị na-achọpụta ọ bụghị naanị ịdị mma ha dị mma, kamakwa maka ike ha na karịa ihe niile maka ụzọ eji eme ha. ntị n'ụzọ dị otú ahụ na ha anaghị amachi ụda site n'èzí.
Dị ka ihe niile dị na ndụ, okpu agha a nwekwara ihe na-adịghị mma ha na, dịka ọtụtụ ndị ọrụ si kwuo, ọ bụ na, ọ bụrụ na ejiri ha ogologo oge, ha agaghị enwe ahụ iru ala. N'aka nke ọzọ, eziokwu bụ na ọnụahịa ya adịghị oke ọnụ, n'agbanyeghị, n'ụfọdụ onyinye ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta ụfọdụ maka obere ihe na-erughị 100 euro.
Dịka nhọrọ nke abụọ achọrọ m ịgwa gị gbasara Sony MDR-AS800BT. N'ime uru nke ụdị okpu agha a, ekwesiri ịmara na ha bụ ọsụsọ na-egosi, dabara adaba na ntị gị ma kwụpụ, dịka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-atọ ha ụtọ kwa ụbọchị, maka ịda ụda ka mma karịa egwuregwu niile ekweisi.
Na ha imewe anyị na-ahụ na ha nwere a button na a okwu nke ị pụrụ ịchịkwa gị dum playlist na ọbụna na-akpọ a ka ogologo dị ka anyị na-ebu ama na anyị. Ha nwere usoro nwere ike igbochi ụdị ụda ọ bụla na-abịa site na mpụga.
Ndabere nke nhọrọ Sony bụ nke ahụ ya price nwere ike ịbụ na gburugburu 150 euro ọ bụ ezie na n'ọnwa ndị ikpeazụ a, anyị enweela ike ịchọta ha n'oge ụfọdụ na ọnụahịa nke ihe dị ka euro 110.
Cellularline Scorpion na ntị Pro
Cellularline, ụlọ ọrụ Italiantali nke na-emere onwe ya aha na ngwa nke ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka n'ihi ịdị mma na nhazi nke ngwa ya, afọ a emeela ka anyị nwee ndị ọgba ọsọ na mwepụta nke ọtụtụ ụdị nke ekweisi egwuregwu na-atọ ụtọ na karịa ihe niile echekwa.
Okwu ikpe Cellularline, n'adịghị ka ndị gara aga, nwere ọnụahịa dị ọnụ ala karịa, na nke Scorpion na Ear Pro, anyị na-ekwu maka ọnụahịa ire ere banyere 39,95 euro, ọnụahịa dị ọnụ ala karịa nke na-apụtaghị na anyị na-azụta ihe nke ịdịkarị ala ma ọ bụ ebe anyị na-agaghị akụ nzọpụta na-akpachapụ anya ma na-adịgide adịgide.
N'ime uru nke okpu agha a, ọ bara uru ịkọwapụta ụdị ha pụrụ iche, mere ka ha nwee ike iguzogide ụdị ọzụzụ niile maka mgbanwe ha, ejiri ihe pụrụ iche na-enye ha ohere ịpinye onwe ha otu aka. N'aka nke ọzọ, ekwesiri iburu n'uche na okpu agha nwere njikwa iji chịkwaa ndepụta egwu gị n'otu oge ahụ ka ha nwere nchebe ọsụsọ.
Anyị na-aga n'ihu na ntinye aka anyị pụrụ iche maka ekweisi egwuregwu kachasị mma ewepụtara na 2017. Oge a anyị ga-akwụsị na Bose SoundSport, nzọ nzọ na-adọrọ mmasị karị ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ iji ekweisi maka ihe niile. N'etiti atụmatụ ya kachasị mma, dịka ọmụmaatụ na-akọwapụta na ha na-eguzogide ọ bụghị naanị ọsụsọ, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ihu igwe ọ bụla.
N'aka nke ya, ekwesiri iburu n'uche na etinyere okpu agha nwere ndụmọdụ nke na-edebe ha, na-enye nkasi obi na ụda dị ike. Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na ha nwere ndụ batrị ruo elekere 6 ma ọ bụ na onye nrụpụta ahụ na-enye ngwa Bose Connect nke ga-enye gị ohere ijikwa ngwaọrụ ejikọrọ na nke ị jikọtara ekweisi iji nye ọtụtụ ndị ọrụ ahụmahụ zuru ezu ma bụrụ nke ahaziri iche.
Ọnụ ego ekweisi ndị a bụ euro 230.
Powerbeats 2 Ikuku
Banye na ika Beats, gosipụta mbata na 2017 nke Powerbeats 2 ya, okpu agha na, n'agbanyeghị ịnwe oke ọnụ ahịa, anyị na-ekwu maka ụfọdụ 180 euro, ha na-eweta mma ma n'ihe eji eme ya na arụmọrụ ha yana ụda nke kwesịrị nnọọ mma.
Dị ka emeputa, na ndị a ikpe ị ga-enwe ike iburu n'isi ruo 8 ngwaọrụ ọ bụ ezie na ha ga-mgbe niile jikọọ kpamkpam akpaghị aka na nke ikpeazụ anyị jikọrọ. Ihe ọzọ dị ha mma bụ na ha nwere batrị nke na-enye ha ohere ịrụ ọrụ na-enweghị ọdịda ruo elekere 8 na-enye ohere njikọ na nrịgo kachasị nke ruru 9 mita site na ngwaọrụ ọkpụkpọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Igwe egwu egwuregwu kacha mma n'afọ
Nyocha ụlọ elu ụda Energy Sistem Multiroom WiFi
Ihe ahụigodo na òké maka Xbox ga-ada n'ahịa